महानायक राजेश हमाल भाइको मुत्युपछी एक्लै बसेर रोइरहेको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
महानायक राजेश हमाल भाइको मुत्युपछी एक्लै बसेर रोइरहेको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल !
Published : 27 July, 2020 8:30 am
महानायक राजेश हमाल पछिल्लो समय गहिरो शोकमा रहेका छन् । कलिलै उमेरमा बुवा अनि अलि पछि आमालाई गुमाएको पिडा भुल्दा नभुल्दै एकमात्र भाईको पनि निधन भएपछि उनले पीडा सहन सकेनन् । एकमात्र भाईको अन्त्येष्टी हेर्न नसकेपछि अभिनेता हमाल एक्लै बसेर रोएको तस्विर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ ।